mpamaky trano – Midi Madagasikara
Tags: mpamaky trano
Antsirabe : Mpamaky trano efa-dahy voasambotry ny polisy
Redaction Midi Madagasikara 17 janvier 2014 Antsirabe, mpamaky trano, voasambotry ny polisy
Olona efa avy nigadra avokoa ireto voasambotra ireto indray. Nisy tamin’izy ireo efa nahavita 10 taona Mirongatra izay tsy izy ny vaky trano teto Antsiabe hatramin’ny niandohan’ny volana desambra 2013 lasa teo. Saika ireo fokontany manodidina dia andrenesana izany avokoa. Tsy fantatra aloha hatreto raha misy tambajotra mihitsy ireo mpanao ratsy fa dia isaky ny…
Antsirabe : Mampiasa fonoka mahery ny jiolahy mpamaky trano
Redaction Midi Madagasikara 8 janvier 2014 Antsirabe, fonoka, Jiolahy, mpamaky trano
Mirongatra ny vaky trano eto Antsirabe raha ny re etsy eroa indrindra Hatramin’ny niandohan’ny fetin’ny krismasy 2013 teo iny dia saika ho isan’andro no andrenesana izany. Tsy mifidy asiana ireo jiolahy fa ny manana ny antonontonony na ny manan-katao dia mahita faisana avokoa. Amin’izao androm-pahavaratra izao rahateo tsy re tsaika ireo jiolahy noho ny fitrahotrahon’ny…